100.000 ar ho an’ny isan-tokantrano Efa mandeha ny fizarana
Tokantrano 24.000 isa miparitaka amina Fokontany 47 ao anatin’ny Boriborintany voalohany sy fahaefatra no nozaraina ilay lela-vola 100.000 Ar fanomezana avy amin’ny Fitondram-panjakana ato anatin’ny 10 andro.
Raha araka ny fanazavan-dRtoa Ieja Ranaivoarivo, tompon’andraikitry ny PAM dia eny amin’ny banky BOA no hakana io lela-vola io. Tsy voatery hanokatra kaonty ilay mpahazo tombontsoa fa mitondra karapanondrom-pirenena sy taratasy mazava dia mahazo ilay lela-vola. Hisy ihany koa no hahazo izany amin’ny alalan’ny western union, asa hiarahan’ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny FID ary ny PAM miara-manatontosa. Tao amin’ny Fokontany III G Hangar moa omaly no nisantarana ny fizarana izany fanampiana izany ka ny tanjona dia ny mba hananan’ireo fianakaviana sahirana lela-vola ho entiny manangaina ny asa fivelomany indray.